विदेशी पैशा खाएर राजालाई गाली गर्ने हक कसैलाई छैन, | YesKhabar
विदेशी पैशा खाएर राजालाई गाली गर्ने हक कसैलाई छैन,
२०७६ साल आश्विन ९ गते, बिहीबार १२:०५ PM
विदेशी पैशा खाएर राजालाई गाली गर्ने हक कसैलाई छैन, राजाले पैसा खाएर देश बेचेको इतिहास छैन, समर्थन गर्ने सबैले शेयर गरौंडा. प्रेम सिंह बस्न्यात नेपाली सेनाका पूर्वब्रिगेडियर जनरल हुन् । सैन्य इतिहासमा विद्या वारिधि गरेका बस्न्यातले धेरैवटा विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । १४ पुस्तक लेखिसकेका बस्न्यातका दुई पुस्तक प्रकाशोन्मुख छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताबारे कडा र स्पष्ट बस्न्यातले यसपटकको अन्तर्वार्तामा निम्नानसारका धारणा राखेका छन् । म पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिबाट उत्साहित छैन । मैले बुझेको जनता पनि उत्साहित छैनन् । जनता पनि दुई खालका छन् । एक स्वतन्त्र म जस्ता जनता र अर्को पार्टीका कार्यकर्ता । अहिलेको राजनीतिबाट खुसी भएको भनेको पार्टीका कार्यकर्ता हुन् ।
अहिले यस्तो माहोल सिर्जना भयो कि ६२/ ६३ को आन्दोलन पछि कसैले पनि शिक्षक, कर्मचारी, डाक्टर,, पाइलट, खरदार मुखिया, सुब्बा जे हुन पनि पार्टीको झोला बोक्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अझ राजदूत र भिसी हुनका लागि त यस्तो धेरै आवश्यक पर्न थाल्यो । दलको पछि लागेकाहरुले घिस्रेर होस, चाहेर होस नचाहेर होस दलहरुले जे जे गर्छन उनीहरु ताली बजाउन विवस हुन्छन् । उनीहरुको रोजीरोटी त्यसमा जोडिएको छ ।
भोलिको दिनमा यति धेरै सांसद, मन्त्री, कर्मचारी थप्नु पर्ने छ । देशले धान्न नसक्ने गरी संरचना बनाइएको छ । मन्त्री र कर्मचारी थपेर विकास हुन्छ ? मन्त्री र कर्मचारी कम भएर यो मुलुक विकास नभएको हो भन्ने सोचले संविधान बनाइएको छ । यसकारण संविधान त्रुटिपूर्ण छ । नेपाललाई चाहिएको राजनीति नेताहरुले गरेको भए ५०–६० जना सांसदले हाम्रो संसद चल्न सक्छ । पश्चिमाहरुले कुनै बदलाको लागि नेपालमा थोपरेको व्यवस्था हो यो । अहिलेको व्यवस्था नेपाली जनताले चाहेको व्यवस्था होइन ।
अहिलेको व्यवस्थाले द्वन्द्व समाधान होइन निम्त्याउने खतरा देखेको छु । चुनावमा देश गएको छ । झोलेहरुका लागि यो ठिक मौसम हो । चुनाव भनेको पैशा कमाउने बाटो पनि हो । एउटा सिंगो नेपाल चलाउन नसक्नेले सात प्रदेश कसरी चलाउँछन ? मुख्य कुरा यो हो । अर्को कुरा के छ भने तराई टुक्रा पार्छु भन्नेलाई यिनीहरुले केही गर्न सकेनन्। बाबुराम भट्टराई जस्ता नेता भएको देश हो । सिके राउत पक्राउ पर्दा उनी मानवअधिकारवादीको पछि लागेर राउतलाई छाड्नु पर्छ भन्दै जाने मानिस हुन् उनी । अहिले ज्ञानेन्द्रले केही बोल्दा उनी किन पाँच हात उफ्रिन्छन ? यो देशलाई जोगाउँ भन्दा यहाँका केही मानिसहरु उफ्रिन्छन् । देशको माया गर्ने मान्छे धेरैलाई बिझाउँछ ।
अहिलेको व्यवस्थाले केन्द्र कमजोर हुनेछ । मुलुक टुक्रा टुक्राको संघ भएपछि विदेशीलाई खेल्न सजिलो हुन्छ । देश टुक्रा पार्नेहरुलाई सजिलो हुन्छ । त्यही सजिलोको लागि संघीयता ल्याइएको हो । विदेशीका दलाल, एनजिओको कारणले विशेषगरी पश्चिमाका कारण देश टुक्रा हुने दिन आउला भन्ने लाग्छ । यो संविधान नागबेली जस्तो भएको छ । पश्चिमाको रुचीले संविधान बनेको छ । कांग्रेस, एमालेलाई मन मनमा घाँडो भएको छ । यो संविधान यिनीहरुले लेखेका होइन । तर पश्चिमाको रुचीमा आएको संविधान यिनीहरु जसरी भए पनि लागू गर्न खोज्दै छन् ।
तिब्बत नेपाल सीमामा क्रिष्चियन बढ्दा उनीहरुलाई दुःख दिन्छन् । नेपाल टुक्रा पार्न, धर्म मास्न खटिएका विदेशीका खेतालाहरुले मेरो नाक कति लामो, मगरको कति छोटो भनेर विषय उचाल्छन् । बुद्धिजीवी भनाउँदाहरुले प्रपोगन्डा गर्छन् । तराई छुट्याउनु पर्छ भन्ने झा थरको एक वकिल जो बेलायतमा पढेर आएका उनी पश्चिमाको पालित पोषित हुन् । उनलाई अहिले राजपा नेपालले समानुपातिकामा नाम राखेको छ । यिनीहरु मन्त्री हुन, मागी खान, विदेशीको नुन खान नेपालीको खुन खान यी प्राज्ञ विज्ञको लागि अहिले व्यापारको मौसम आएको छ ।
पूर्वराजाले ठिक समयमा बोलेका छन् । अब जो होस हामीलाई राजा चाहिएको छ । देशले राजा खोजेको छ । सडकमा जनता निस्किने बेला भइसकेको छ । सेनाले पनि अहिले टुलुटुलु हेरेर बस्ने बेला होइन यो । सेनाले डारेक्टु ‘कू’ गर्न हुँदैन । कुनै राजनीतिक पार्टीलाई साथमा लिएर प्रभावकारी भूमिकामा सेना आउनु पर्छ । सेना टुलुटुलु हेरेर बसेर हेर्यो भने सेनालाई पाप लाग्छ । गोर्खाको एउटा कोटबाट टिस्टा काँगडा लडेका हाम्रा पूर्खाको नासो हो नेपाली सेना । यस्तो सेनाले मौनता साँध्नु भनेको देश डुब्न दिनु हो । अब सेना राजासँग मिलेर तीनै सुरक्षा अंगको साथ लिएर ‘मूभ’ हुनुपर्छ ।
मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । देशको अहित गर्ने विदेशीको हित गर्ने गरी काम गर्नेहरु देख्दा देख्दै पनि नेपालका सुरक्षा अंगहरु टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । समातेर कारबाही गर्न सकेका छैनन् । भारतमा कुनै सेनाको विरुद्धमा कसैले बोलोस त के हुन्छ ? अमेरिका, पाकिस्तानमा बोलून त । के हुन्छ । नेपालको अस्मिता विदेशीलाई बुझाएर नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्नेहरु छन् । महेन्द्रनगरमा गोविन्द गौतम मारिए । भारतीय एसएसबीले गोली ठोकेर मार्छ ।
नेपालमा भारतविरुद्ध प्रदर्शन होला भनेर हत्तपत्त शहीद घोषणा गर्ने र १० लाखले मुखमा बुजो लगाउने काम गर्छन । यस्तो काम गर्ने अरु कोही होइन विमलेन्द्र निधि र प्रचण्ड हुन । अनि यस्ता नेताले हाम्रो हित गर्छन ? बाढीमा मान्छेको बेहाल हुन्छ, त्यहाँ पनि पैशा बाँडी हाल्ने । नेपाली दिदी बहिनीलाई अपशब्द गर्नेलाई, देशको अस्मिता बेच्नेलाई हामी नेता मान्न विवश छौं । यो अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्छ । यी भातमाराहरुका कारण मैले भन्ने गरेको छु, कि नेपालमा राजा चाहियो । नत्र सेना अगाडि बढुनु पर्छ ।
बेलायतको विन्सटन चर्चिल पूर्वसैनिक हुन् । फ्रान्स, जापान जहाँ पनि पूर्व सैनिकले देश विकास गरेका छन् । पूर्वराजाले मात्रै होइन हामी पनि भन्छौं, अब बेला आएको छ । हामी अगाडि बढौं । यी खातेहरुको शासन सहेर अब नबस्ने । नेपालमा बाहुन राजाहरुले शासन गरिरहेका छन अहिले । ६२ पछि हेर्नुस बाहुन राजाहरु गिरिजा वीर बिक्रम, माधववीर विक्रम, केपी वीरविक्रम, प्रचण्ड वीर विक्रम, झलनाथ वीरविक्रम ।
यी सबै बाहुन राजाले देश बिगारेका छन् । यिनीहरुले के गरे नेपालमा ? नेपाललाई कहाँ पुर्याए भन्नुहोस त । अहिले शाह राजाले यसो गरे, मल्ल राजाले उसो गरे भन्नेहरुलाई सोध्न चाहन्छ यी बाहुन राजाहरुले के गरे त ? हाम्रो देशमा राजाले कुनै गल्ति गरेका छैनन् । ज्ञानेन्द्रका छोरा पारसरले यसो गरे र उसो गरे भन्छन् । पारसले भन्दा पनि प्रचण्डका छोरा प्रकाशले केसम्म गरेका छन् आफै बुज्नुहोस । राजनीति भनेको सधै सोचेको जस्तो हुँदैन । राम्रो गर्छु भन्दा कहिले काही गल्ति हुँदैन ।
ज्ञानेन्द्रले कहिले देश टुक्रा पार्ने कुरा गरेनन् । उनका पूर्खाले गरेनन् । म नेपाली सेनामा काम गर्ने बस्नेत परिवारको १२ औं पुस्ताको मान्छे हुँ । म भन्दा माथि मेरा १२ पुस्ताका पुर्खाले नेपाली सेना भएर देशका लागि लडे मरे । त्यही खुन मभित्र पनि छ । नेपाल टुक्रा पार्छु भन्नेहरुलाई म पहिले टुक्रा पार्छु । भारतमा तालिम गराएर नेपालमा बम पड्काउने काम भयो । अहिले देश ‘न बाच्छाको मुखमा न ढुंग्रो’ को स्थिति भएको छ । एनजिओको, विदेशीको पैशा खाएर देश टुक्रा पार्न खोज्नेहरुलाई हामीले चिन्नु पर्छ ।